Zomato - Restaurant Finder and Food Delivery App 13.2.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 13.2.7 လြန္ခဲ့ေသာ4လက
Application မ်ား စားစရာ & ေသာက္စရာ Zomato - Restaurant Finder and Food Delivery App
Zomato - Restaurant Finder and Food Delivery App ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဇိုမတိုသင်တို့အဘို့ရှာကနေမှာသို့မဟုတ်အမိန့်ကိုထုတ်စားရန်စားသောက်ဆိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပေးနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအစာစားချင်ဘယ်မှာဆုံးဖြတ်စားသောက်ဆိုင် menus တွေ, ဓါတ်ပုံများအသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် ratings မှတဆင့် Browse နှင့်ထိုပြည်၌သင်တို့သည်လမ်းပြမြေပုံအင်္ဂါရပ်ကိုသုံးပါ။
သငျသညျအိန္ဒိယ, ယူအေအီး, ဒါမှမဟုတ်လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအစထဲကနေရွေးချယ်ဖို့အကြီးအစာအာဟာရကိုဖြန့်ဝေစားသောက်ဆိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတူပေးပို့များအတွက်အွန်လိုင်းအစားအစာအမိန့်ပေးနိုင်သည်။
* စားသောက်ဆိုင်များကိုအလွယ်တကူရှာဖွေရန်, တည်နေရာ, အစားအစာ (အီတလီဥပမာ, တရုတ်, အိန္ဒိယ) ကCafé, Pubs နှင့်ဘား, နာမည် (ဥပမာ Starbucks က, ဒိုမီနိုရဲ့ပီဇာ, Amaya) ။
* သင့်ရဲ့လက်ရှိတည်နေရာအနီးရှိသူတွေကိုအပါအဝင်, သင့်မွို့၌ရှိသမျှသောစားသောက်ဆိုင် Explore နှင့်အကောင်းဆုံးသင်ကိုက်ညီသောတဦးတည်းကိုရှာဖွေရှာဖွေရေး filter များအသုံးပြုပါ။
* ကြည့်ရန် menus တွေ, ဓာတ်ပုံတွေ, ဖုန်းနံပါတ်များ, လမ်းညွန်, အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, သင် Dine ထဲကအစားအသောက်ပို့ဆောင်မှု, ညပွဲလမ်း, ဒါမှမဟုတ် Takeaway များအတွက်စားသောက်ဆိုင်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်သမျှအခြားသတင်းအချက်အလက်။
* အကောင်းဆုံးကိုဘာဂါစုံလင်သည့်ရက်စွဲအစက်အပြောက်, ဒါမှမဟုတ်ထိပ်ရေပန်းစားစားသောက်ဆိုင်နေရာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်-based ပြတိုက်မှူးစာရင်းကို Browse ။
* နှုန်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်စားသောက်ဆိုင်ကိုသင်ခဲ့, နှင့် app ကိုမှတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့အစားကောင်းကြိုက်သူများအချိန်လေး၏ဓါတ်ပုံများကိုမျှဝေပါတယ်။
* သင် Bookmarks နှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှုချင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးသို့မဟုတ်နေရာများကိုအလွယ်တကူကိုးကားချက်စာရင်းထိန်းသိမ်းပါ။
* သင့်ပတ်လည်စားသောက်ဆိုင်စူးစမ်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဧရိယာထဲမှာရှာဖွေစက်ဝိုင်းဆွဲရန်မြေပုံမြင်ကွင်းကိုသုံးပါ။
* Find နှင့်သူတို့အစာစားခြင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်ရှုရန်သင့်မိတ်ဆွေများကိုလိုက်နာပါ။
* ဂျာနယ်သင်သည်သင်၏ Dineline အသုံးပြု. မှာစားစားသောက်ဆိုင်။
* In-app ကိုစားပွဲပေါ်မှာ booking (တည်နေရာကိုရွေးပါ) - သင်တို့ရှိသမျှသည်မိတ်ဖက်စားသောက်ဆိုင်မှာစားပွဲတစ်ခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
* ကင်မရာ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စားသောက်ဆိုင်၏ဓါတ်ပုံများကိုယူရန်။
* ဆက်သွယ်ရန် - Google ကနေတဆင့်ဇိုမတိုအတွက်လက်မှတ်ထိုးဘို့သင်၏ Google အကောင့်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်။
* တည်နေရာ - သင့်တည်နေရာကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သင်နှင့်အနီးဆုံးစားသောက်ဆိုင်ကိုပြသရန်။
* ဖုန်း - တိုက်ရိုက်စားသောက်ဆိုင်စာရင်းထဲကနေစားသောက်ဆိုင်မှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရန်။
* SMS ကို - တစ်အွန်လိုင်းမိန့်အားမရစဉ် OTP ကိုဖတ်ရှုရန်ဖုန်းနံပါတ်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုချက်အဘို့လိုအပ်သည်။
* သိုလှောင် - သငျတို့ကဖမ်းယူထားသည့်ဓါတ်ပုံများကိုသိမ်းဆည်းထားရန်နှင့်သင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခံရဖို့ဓာတ်ပုံများဝင်ရောက်ဖို့။
* ဖုန်းပြည်နယ် - အနိမ့် bandwidth ကို network ပေါ်မှာစွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးအဘို့ဆယ်လူလာကွန်ရက်ကသတင်းအချက်အလက်ဖော်ထုတ်ရန်ရန်။
ဇိုမတိုဟာ, အိန္ဒိယကိုဖြတ်ပြီး 10000 ကျော်မြို့ကြီးများအတွက်ယခုရရှိနိုင်
အမေရိကန်, သြစတြေးလျ, ဗြိတိန်, ယူအေအီး, ကနေဒါ, အိုင်ယာလန်, နယူးဇီလန်, တောင်အာဖရိက, ပေါ်တူဂီ, ဖိလစ်ပိုင်, အင်ဒိုနီးရှား, တူရကီ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, လိုဗက်ကီးယား, ပိုလန်, ချီလီ, အီတလီ, လက်ဘနွန်, ဘရာဇီး, သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနှင့်ကာတာနိုင်ငံ။ ပိုများသောနေရာများအလွန်မကြာမီလာမယ့်။
အမေရိကန်, သြစတြေးလျနှင့်ကနေဒါ - ငါတို့သည်အရင်တုန်းကသင်၏နိုင်ငံများတွင် Urbanspoon ဟုခေါ်ကြသည်။
Zomato - Restaurant Finder and Food Delivery App အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Zomato - Restaurant Finder and Food Delivery App အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Zomato - Restaurant Finder and Food Delivery App အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Zomato - Restaurant Finder and Food Delivery App အား အခ်က္ျပပါ
Zomato - Restaurant Finder and Food Delivery App ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Zomato - Restaurant Finder and Food Delivery App အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 13.2.7
ထုတ်လုပ်သူ Selecta AG
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.zomato.com/privacy
App Name: Zomato - Restaurant Finder and Food Delivery App
Release date: 2019-05-18 15:25:41
လက်မှတ် SHA1: 08:B0:E4:FD:1D:A1:A2:FD:30:84:FA:9B:6F:F4:F9:E6:B3:89:B3:71
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Anuj Middha
အဖွဲ့အစည်း (O): Zomato
Zomato - Restaurant Finder and Food Delivery App APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ